किन मार्केटिङ र आईटी टोलीहरूले साइबर सुरक्षा जिम्मेवारीहरू साझा गर्नुपर्छ Martech Zone
किन मार्केटिङ र आईटी टोलीहरूले साइबर सुरक्षा जिम्मेवारीहरू साझा गर्नुपर्छ
शुक्रबार, जनवरी 21, 2022 शुक्रबार, जनवरी 21, 2022 अलेक्जेन्डर गार्सिया-टोबार
महामारीले संगठन भित्रका प्रत्येक विभागलाई साइबर सुरक्षामा बढी ध्यान दिनको आवश्यकतालाई बढायो। त्यो अर्थ राख्छ, हैन? हामीले हाम्रा प्रक्रियाहरू र दिन-प्रतिदिनको काममा जति धेरै प्रविधि प्रयोग गर्छौं, हामी उलंघनको लागि त्यति नै कमजोर हुन सक्छौं। तर राम्रो साइबर सुरक्षा अभ्यासहरू अपनाउन राम्ररी जानकार मार्केटिङ टोलीहरूबाट सुरु गर्नुपर्छ।
साइबर सुरक्षा सामान्यतया सूचना प्रविधिको लागि चिन्ताको विषय भएको छ (IT) नेताहरु, प्रमुख सूचना सुरक्षा अधिकारीहरु (CISOर प्रमुख प्राविधिक अधिकारीहरू (CTOवा प्रमुख सूचना अधिकारी (CIO)। साइबर अपराधको विस्फोटक बृद्धिले - आवश्यकता अनुसार - उच्च साइबर सुरक्षालाई त्यो भन्दा परे केवल एक आईटी चिन्ता। अन्त्यमा, C-suite कार्यकारीहरू र बोर्डहरूले अब साइबर जोखिमलाई 'IT समस्या' को रूपमा देख्दैनन् तर एक खतराको रूपमा जुन हरेक तहमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। एक सफल साइबर आक्रमण लेवी गर्न सक्ने क्षतिलाई पूर्ण रूपमा लड्न कम्पनीहरूले उनीहरूको समग्र जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिमा साइबर सुरक्षालाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ।
पूर्ण सुरक्षाको लागि, कम्पनीहरूले सुरक्षा, गोपनीयता र ग्राहक अनुभवहरू बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। तर संगठनहरू कसरी यो कठिन सन्तुलनमा पुग्न सक्छन्? उनीहरूको मार्केटिङ टोलीहरूलाई थप सक्रिय भूमिका लिन प्रोत्साहित गरेर।
किन मार्केटरहरूले साइबरसुरक्षाको बारेमा ख्याल गर्नुपर्छ?
तपाईको ब्रान्ड नाम तपाईको प्रतिष्ठा जत्तिकै राम्रो छ।
प्रतिष्ठा बनाउन 20 वर्ष र यसलाई बर्बाद गर्न पाँच मिनेट लाग्छ।
त्यसोभए के हुन्छ जब साइबर अपराधीहरूले जानकारी प्राप्त गर्छन् र पहुँच प्राप्त गर्न उनीहरूले कम्पनीलाई सफलतापूर्वक प्रतिरूपण गर्न, आफ्ना ग्राहकहरूलाई धोका दिने, डाटा चोरी गर्न वा खराब गर्न आवश्यक छ? कम्पनीको लागि गम्भीर समस्या।
यसकाे बारेमा साेच। लगभग 100% व्यवसायहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई मासिक मार्केटिङ इमेलहरू पठाउँछन्। प्रत्येक मार्केटिङ डलरले खर्च गरेको लगानीमा प्रतिफल (ROI) लगभग $36 देख्छ। आफ्नो ब्रान्डलाई हानी गर्ने फिसिङ आक्रमणहरूले मार्केटिङ च्यानलको सफलतालाई धम्की दिन्छ।
दुर्भाग्यवश, स्क्यामरहरू र खराब अभिनेताहरूको लागि अरू कसैको बहाना गर्न यो सबै धेरै सजिलो छ। यस स्पूफिङलाई रोक्न प्रविधि परिपक्व र उपलब्ध छ, तर अपनाउने अभाव छ किनभने कहिलेकाहीँ कुनै IT संस्थालाई स्पष्ट व्यवसाय प्रदर्शन गर्न गाह्रो हुन्छ। रय संगठन भर सुरक्षा उपायहरूको लागि। BIMI र DMARC जस्ता मापदण्डका फाइदाहरू अझ स्पष्ट हुन थालेपछि, मार्केटिङ र IT ले एक आकर्षक संयुक्त कथा चित्रण गर्न सक्छ। यो साइबरसुरक्षाको लागि थप समग्र दृष्टिकोणको लागि समय हो, जसले साइलोलाई तोड्छ र विभागहरू बीचको सहकार्य बढाउँछ।
IT लाई थाहा छ DMARC संगठनहरूलाई फिसिङ र प्रतिष्ठाको हानिबाट जोगाउनको लागि महत्त्वपूर्ण छ तर नेतृत्वबाट यसको कार्यान्वयनको लागि खरीद-इन प्राप्त गर्न संघर्ष गर्दछ। सन्देश पहिचानको लागि ब्रान्ड सूचकहरू (बिमी) सँगै आउँछ, मार्केटिङ विभागमा उत्साह उत्पन्न गर्दछ, जुन यो चाहन्छ किनभने यसले खुला दरहरू सुधार गर्दछ। कम्पनीले DMARC र BIMI र voilà लागू गर्दछ! IT ले दृश्यात्मक, ठोस जीत हासिल गर्छ र मार्केटिङले ROI मा ठोस बम्प प्राप्त गर्दछ। सबैले जित्छन्।
टिमवर्क कुञ्जी हो
अधिकांश कर्मचारीहरूले आफ्नो आईटी, मार्केटिङ र अन्य विभागहरू साइलोमा हेर्छन्। तर साइबर आक्रमणहरू थप परिष्कृत र जटिल हुँदै गएपछि, यो विचार प्रक्रियाले कसैलाई फाइदा गर्दैन। मार्केटरहरू पनि संगठन र ग्राहक डेटा सुरक्षित गर्न मद्दत गर्न बाध्य छन्। किनभने तिनीहरू सामाजिक मिडिया, विज्ञापनहरू र इमेल जस्ता च्यानलहरूसँग धेरै नजिक छन्, मार्केटरहरूले ठूलो मात्रामा जानकारी प्रयोग र साझेदारी गर्छन्।
सामाजिक ईन्जिनियरिङ् आक्रमणहरू सुरु गर्ने साइबर अपराधीहरूले यसलाई उनीहरूको फाइदाको लागि प्रयोग गर्छन्। तिनीहरू नक्कली अनुरोध वा अनुरोधहरू पठाउन इमेल प्रयोग गर्छन्। जब खोलिन्छ, यी इमेलहरूले मार्केटरहरूको कम्प्युटरलाई मालवेयरले संक्रमित गर्छ। धेरै मार्केटिङ टोलीहरूले विभिन्न बाह्य विक्रेताहरू र प्लेटफर्महरूसँग पनि काम गर्छन् जसमा पहुँच वा गोप्य व्यापार जानकारीको आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ।
र जब मार्केटिङ टोलीहरूले कमसँग धेरै गर्दा ROI वृद्धि देखाउने अपेक्षा गरिन्छ, तिनीहरू लगातार नयाँ, नवीन प्रविधि खोजिरहेका हुन्छन् जसले उत्पादकता र दक्षता बढाउँछ। तर यी प्रगतिहरूले साइबर आक्रमणको लागि अनपेक्षित उद्घाटनहरू सिर्जना गर्न सक्छ। यही कारणले गर्दा मार्केटरहरू र IT पेशेवरहरूले सहकार्य गर्न र मार्केटिङ सुधारहरूले कम्पनीलाई सुरक्षा जोखिमहरूको लागि कमजोर नछोड्ने सुनिश्चित गर्न आफ्नो साइलोबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। सीएमओ र सीआईएसओहरूले तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्नु अघि समाधानहरू लेखा परीक्षा गर्नुपर्छ र सम्भावित साइबर सुरक्षा जोखिमहरू पहिचान गर्न र रिपोर्ट गर्न मार्केटिङ कर्मचारीहरूलाई तालिम दिनुहोस्।
IT पेशेवरहरूले मार्केटिङ पेशेवरहरूलाई निम्न प्रयोग गरेर सूचना सुरक्षा उत्तम अभ्यासहरूको भण्डारी बन्न सशक्त गर्नुपर्छ:
पासवर्ड प्रबन्धकहरू मनपर्छ Dashlane or LassPass.
एकल साइन-अन (SSO)
मार्केटरहरूको साइबरसुरक्षा रणनीतिहरूमा समावेश गर्न अर्को मूल्यवान उपकरण? DMARC.
मार्केटिङ टोलीहरूको लागि DMARC को मूल्य
डोमेन-आधारित सन्देश प्रमाणीकरण, रिपोर्टिङ र कन्फर्मेन्स इमेल प्रमाणीकरणको लागि सुनको मानक हो। प्रवर्तनमा DMARC अपनाउने कम्पनीहरूले ग्यारेन्टी दिन्छन् कि स्वीकृत संस्थाहरूले मात्र उनीहरूको तर्फबाट इमेलहरू पठाउन सक्छन्।
DMARC (र अन्तर्निहित प्रोटोकलहरू SPF र DKIM) प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेर र प्रवर्तनमा पुगेर, ब्रान्डहरूले सुधारिएको इमेल डेलिभरिबिलिटी देख्छन्।. प्रमाणीकरण बिना, कम्पनीहरूले फिसिङ र स्प्याम इमेलहरू पठाउन आफ्नो डोमेन प्रयोग गरेर साइबर अपराधीहरूको लागि खुला छोड्छन्। प्रवर्तनमा DMARC ले ह्याकरहरूलाई सुरक्षित डोमेनहरूमा नि:शुल्क सवारी समात्नबाट रोक्छ।
न त SPF वा DKIM ले प्रयोगकर्ताहरूले देखेको "प्रेषक:" फिल्ड विरुद्ध प्रेषकलाई प्रमाणीकरण गर्दैन। DMARC रेकर्डमा निर्दिष्ट गरिएको नीतिले देखिने From: ठेगाना र DKIM कुञ्जीको डोमेन वा SPF प्रमाणित प्रेषक बीच "पङ्क्तिबद्धता" (अर्थात मिल्दोजुल्दो) छ भनी सुनिश्चित गर्न सक्छ। यस रणनीतिले साइबर अपराधीहरूलाई बोगस डोमेनहरू प्रयोग गर्नबाट रोक्छ बाट: क्षेत्र जसले प्राप्तकर्ताहरूलाई मूर्ख बनाउँछ र ह्याकरहरूलाई अनजान प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको असंबद्ध डोमेनहरूमा पुन: रुट गर्न अनुमति दिन्छ।
मार्केटिङ टोलीहरूले सम्भावित ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्न मात्र होइन इमेलहरू पठाउँछन्। अन्ततः, तिनीहरू ती इमेलहरू खोल्न र कार्य गर्न चाहन्छन्। DMARC प्रमाणीकरणले सुनिश्चित गर्दछ कि ती इमेलहरू इच्छित इनबक्सहरूमा आइपुग्छन्। ब्रान्डहरूले सन्देश पहिचान (BIMI) को लागि ब्रान्ड सूचकहरू थपेर आफ्नो लचिलोपनलाई अझ बलियो बनाउन सक्छन्।
BIMI ले DMARC लाई ठोस मार्केटिङ ROI मा परिणत गर्दछ
BIMI एउटा उपकरण हो जुन हरेक मार्केटरले प्रयोग गर्नुपर्छ। BIMI ले मार्केटरहरूलाई उनीहरूको ब्रान्डको लोगो सुरक्षित इमेलहरूमा थप्न दिन्छ, जुन औसतमा १०% ले खुला दरहरू बढाएको देखाइएको छ।
छोटकरीमा, BIMI मार्केटरहरूको लागि ब्रान्ड लाभ हो। यो बलियो इमेल प्रमाणीकरण टेक्नोलोजीहरू - प्रवर्तनमा DMARC - र मार्केटिङ, IT र कानुनी विभागहरू सहित विभिन्न सरोकारवालाहरू बीचको सहकार्यमा निर्मित छ।
मार्केटरहरूले प्राप्तकर्ताहरूको ध्यान खिच्नका लागि सधैं चतुर, आकर्षक विषय रेखाहरूमा भर परेका छन्, तर BIMI सँग, लोगो प्रयोग गर्ने इमेलहरू छिटो र पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। उपभोक्ताहरूले इमेल नखोल्दा पनि लोगो देख्छन्। टी-शर्ट, भवन, वा अन्य स्वैगमा लोगो राख्ने जस्तै, इमेलमा रहेको लोगोले तुरुन्तै ब्रान्डमा रिसीभरहरूको ध्यान आकर्षित गर्छ — सन्देश नखोलीकन पहिले कहिल्यै सम्भव नहुने विकास। BIMI ले मार्केटरहरूलाई चाँडै इनबक्समा प्रवेश गर्न मद्दत गर्दछ।
Valimail को DMARC सेवाको रूपमा
DMARC प्रवर्तन is BIMI को बाटो। यस मार्गमा हिड्नका लागि DNS ले सबै पठाइएका मेलहरूलाई सही रूपमा प्रमाणीकरण गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ — व्यवसायहरूको लागि समय-उपभोग गर्ने गतिविधि। केवल 15% कम्पनीहरूले सफलतापूर्वक आफ्नो DMARC परियोजनाहरू पूरा गर्छन्। त्यहाँ राम्रो तरिका हुनुपर्छ, हैन? त्यहाँ छ!
Valimail प्रमाणिकरणले DMARC लाई सेवाको रूपमा प्रदान गर्दछ, जसमा:
स्वचालित DNS कन्फिगरेसन
बुद्धिमान प्रेषक पहिचान
एक सजिलो-पछ्याउन कार्य सूची जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई द्रुत, चलिरहेको DMARC प्रवर्तन प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ
DMARC प्रमाणीकरण™ DNS प्रावधानबाट जोखिम लिन्छ। यसको पूर्ण दृश्यताले कम्पनीहरूलाई उनीहरूको तर्फबाट कसले इमेल पठाउँदैछ भनेर हेर्न अनुमति दिन्छ। निर्देशित, स्वचालित कार्यप्रवाहहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रत्येक कार्यमा गहिरो, प्राविधिक ज्ञान वा बाहिरको विशेषज्ञताको आवश्यकता बिना सेवाहरू कन्फिगर गर्नको लागि हिंड्छ। अन्तमा, सान्दर्भिक विश्लेषणहरूले स्वचालित सिफारिसहरू प्रमाणित गर्न मद्दत गर्दछ — र अलर्टहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई अप-टु-डेट राख्छन्।
मार्केटिङ विभागहरू साइबर सुरक्षा चिन्ताहरूबाट टाढा, साइलोमा बस्न सक्दैनन्। Twitter, LinkedIn र अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा ठूलो उपस्थितिको लागि तिनीहरू थप पहुँचयोग्य भएकाले, ह्याकरहरूले तिनीहरूलाई सजिलो, शोषणयोग्य लक्ष्यको रूपमा हेर्छन्। संगठनहरूले साइबरसुरक्षा जागरूकताको संस्कृति सिर्जना गर्ने मूल्यलाई मान्यता दिँदा, तिनीहरूले आफ्नो मार्केटिङ टोलीहरूलाई IT र CISO टोलीहरूसँग जोखिम व्यवस्थापन तालिकामा सहकार्य गर्न आमन्त्रित गर्नुपर्छ।
Valimail कोसिस गर्नुहोस्
टैग: बिमीब्रान्ड अपहरणcisectocyberattackscybercrimecybersecurityDMARCईमेल प्रमाणीकरणइमेल मार्केटिङईमेल प्रतिष्ठाईमेल प्रतिष्ठा व्यवस्थापनबहु कारक प्रमाणीकरणफिसिङप्रतिष्ठाspoofing
एक क्रमिक उद्यमी र विश्वव्यापी कार्यकारी, अलेक्ज्याण्डर अघिल्लो दुई फर्महरूमा सीईओ भइसकेका छन् र आईपीओमा गएका तीन कम्पनीहरूको लागि विश्वव्यापी बिक्री टोलीहरू चलाएका छन्। उनले द बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप र फोरेस्टर रिसर्च जस्ता सिलिकन भ्याली स्टार्टअपहरू जस्तै ValiCert, Sygate, र SyncTV जस्ता प्रमुख अनुसन्धान कम्पनीहरूमा विश्लेषक र कार्यकारी पदहरू सम्हालेका थिए।
कसरी इकाई रिजोल्युसनले तपाईंको मार्केटिङ प्रक्रियाहरूमा मूल्य थप्छ